Ganja Dwarf autoflowering chikadzi | MyWeedSeeds.com
Ganja Dwarf autoflowering yakagadzirwa nemunhukadzi
Zvibereko: kusvika 13oz | 350g m2
Ganja Dwarf / Lowryder auto maruva echikadzi mbeu dzembanje musanganiswa wezvose zvakanakisa hunhu kubva mudzinza rake - rakasarudzika William's Wonder, rakakurumbira Northern Light mbanje indica, uye exotic ruderalis-mhando tateguru. Kutenda kuzvizvarwa zvipfumbamwe zvekungwarira kwekusarudza, zvivakwa zvake zvine mutsindo uye zvakavimbika. Ganja Dwarf / Lowryder inowanzo kurimwa mukati memba, nekuti chimiro chake chipfupi chinokwana nzvimbo diki uye haadi maawa ake echiedza akaderedzwa kumanikidza kutumbuka. Nekuda kweayo otomatiki maruva echisikigo, anokura padanho rake rekutumbuka pasina chinomera chekukura. Iyo auto inotumbuka chirimwa inotanga ichikura mushure memasvondo matatu. Zvisinei nemamiriro ezvinhu akareruka. Saka zita "auto maruva". Mumamiriro ekunze anodziya anokwanisa kuchinjira mukukura panze apo chimiro chake chepasi chinopa zvakanakira pachena. Iye ane simba, anokurumidza kukura, akaumbika, uye nyore kuviga pfuma diki. Ganja Dwarf / Lowryder mbanje michero inogadzira yakasimba zvine simba, asi iyo yepamusoro THC mwero inoita kuti ive yakanaka. Tarisira yakasimba chiratidzo chemuviri buzz iyo yakaturika kwenguva refu. Kunhuwirira kwake uye kuravira kwakasarudzika zvinonhuwira neiyo shoma yazvino michero inoyerera pasi.